သူမသည် အလွန် လက်ရေးလှ၏ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သူမသည် အလွန် လက်ရေးလှ၏
သူမသည် အလွန် လက်ရေးလှ၏
Posted by ムラカミ on Jan 1, 2012 in Copy/Paste, Creative Writing, My Dear Diary | 39 comments
သူမ၏ လက်ရေးများသည် ..ဘာ့ကြောင့် ညီညာဝိုင်းစက် နေပါသနည်း..
သူမသည် လူ၁၀၀၀တွင် တယောက် ရနိုင်ခဲသည့် လက်ရေးလှပိုင်ရှင်လေးဖြစ်သည်..
လက်ရေးလှတဲ့သူများသည် ...လက်ရေးဆိုးတဲ့လူများသည် ....
ဘာဖြစ်သည် ညာဖြစ်သည် .....ဆိုသော လက်ရေးမှ ပြောသော လူ့ စရိုက် အကြောင်း..
ကျနော် မသိပါ ....ကျနော် သိတာက သူမ သည် လက်ရေးအလွန်လှ၏ .....
နာမည်ကျော် ကျောင်းတစ်ကျောင်း၏ ကျောင်းသား ထောင်ပေါင်းများစွာထဲမှ...
အောင်လက်မှတ်(၀ါ)ဆုလက်မှတ်ချီးမြှင့်ရာတွင် တာဝန်ယူ ရေးရသော လက်ရေးပိုင်ရှင်
၃ဦးထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်၏ ။
သူမသည် အလွန် လက်ရေးလှ၏ ..
လှသည်ဆိုသော စာကားလုံး သည်ပင်လျင်သူမ၏ လက်ရေး၏ ဂုဏ်သတ္တိကို
လောက်ငှအောင် ဖော်ပြခြင်းငှာ မစွမ်းသာပေ...
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရှင်းလင်းပြေပြစ်သည့် ဂုဏ်.. ဖော်ရွေနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော
ဂုဏ်... စသည်တို့ကို လှသည် ဆိုသော စကားလုံးက cover မဖြစ်သောကြောင့်တည်း...
ကျနော် ငယ်ငယ်က ဘောလုံးကန်၏ လှေလှော်၏ ပန်းချီရေး၏ ထို့အတူ ...ကဗျာလည်း ရေး၏
တခါတရံ ကျနော် ဆုရ၏ ... ထိုဆု အတွက် ဂုဏ်ပြုလွှာများ ရရှိခဲ့ဖူး၏ ..
အားလုံး သူမ၏ လက်ရေးနှင့်ချည်း ...။ တခါတရံ ကျနော် အနှီ လက်ရေးလေးများအား
လိုချင်တပ်မက်မိ၍ ကြိုးစားမိသလားပင် မပြောတတ်။
ကျနော် လိုက်ရေးကြည့်မိ၏ ။ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀ ကျနော့် ဗမာစာလက်ရေးသည်
နောက်ဆုံး သူ့လက်ရေးနှင့် အတော်အတန်ဆင်လာ၏ ..အရင်ကပြောခဲ့ဖူးသလို ကျနော်သည်
ဘယ်သန်ဖြစ်သောကြောင့် ညာလက်နှင့် စာများများရေးသည့်အခါ အခက်အခဲ ရှိ၏
လက်ခလည် တတိယဆစ် နာကျင်၏ ...။
ကျနော့်လက်ရေးသည် ကြာတော့ အသတ် တွေကြီးလာ၏ ..၀ဆွဲတွေထွားလာ၏
ဒါကိုယ်က ကျနော့် ပင်ကိုယ် စတိုင် သော့ခြင်းတမျိုးဖြစ်လာ၏ ...
ထိုလက်ရေး ခပ်သော့သော့ဖြင့် သူမအား ..စာတိုစာရှည်များစွာ ပေးခဲ့ဖူးပါ၏
သူမဆီကလည်း အပြုံးပန်း တပွင့် ရဖူးပါ၏
သူမသည် ယဉ်ကျေးမှုအရသော်လည်းကောင်း ..အမှန်တကယ်သော်လည်းကောင်း
ကျနော့်လက်ရေးကို သဘောကျသည် ပြော၏။ ကျနော်သူ့ကိုတုပြီး ကျင့်ထားကြောင်း
ပြောတော့ ပြုံး၏။ ထိုအပြုံးကို ယနေ့တိုင် မျက်စိထဲကမထွက်တာ ၀န်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်ပေါင်း ၅၀၀ ခန့်ထိ ...သူမလက်ရေးသည် ငယ်ငယ်တုန်းကလို
လှနေဆဲ ဆိုတာ ကျနော် မြင်ခွင့်ရလိုက်၏ ။ ကျနော့်ကို သူမ စာရေးစေ၏ ။
ကျနော့်လက်ရေး ..အတော်စုတ်ပြတ်နေပီဖြစ်သည်။ ဖတ်၍ရယုံလောက်သာ ရှိတော့၏
ကျနော် လက်ရေးပျက်သွားသည့်အတွက် ..သူမ စိတ်မကောင်းဟု ဆိုသည်။
ကျနော် ကတော့ ယခင်လို ခဲတံ ဘောပင် ကိုင်၍ စာမရေးတော့....။
လက်၁၀ချောင်းလုံးသုံးကာ ကီးဘုတ်နှပ်ကာ စာရေး၏ ။ ကျနော်သည် အောက်ခြေလွတ်
နေသော လူတန်းစားမျှသာဖြစ်၏ ။ ကျနော့်ကို စာရေးဆရာ ဟု သတ်မှတ်ပါက ...
ကျနော်သည် ဘောပင် စာရွက် မကိုင်သော Typing သမား အဆင့်ထက်မပိုပါချေ။
ကျနော့်ကို ဒါ့ပုံဆြာ ဟုခေါ်ဆိုပါက ..ကျနော်သည် ...ဖလင် မကိုင်ဘူး ..မဆေးဖူးသော
ဒါ့ပုံဆြာ ပါပေ။ ကျနော် သည် အခြေခံ တန်ဖိုးများမပြည့်ဝသည့် လူ့ပေါက်ပန်းမျှသာဖြစ်၏
သို့တစေ သူမ လက်ရေးလေးများကို ကျနော် ထပ်မြင်ချင်သေးပါ၏ ..အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်..
(စာကြွင်း ...ဒါဟာ ကာရံမပါပေမယ့် မင်းရေးစေချင်သေးတယ် ဆိုတဲ့ ကဗျာပဲပေါ့ ကောင်မလေးရယ်.....)
P.S သည်စာသည် တယောက်သောသူကို အမှန်တယ်ပေးခဲ့သော မိုင်ဒီးယားဒိုင်ယာရီ ဖြစ်၏
Copy/ Paste ထဲမှာပင် ထားစေလိုပါသည် ...အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ...Microsoft Word
ထဲမှာရိုက်ပြီး ယခု wordpress ပေါ်တွင် လာ paste ထားသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်...
နှစ်သစ်မှာ ပို့စ် အသစ်အဖြစ်
ရေးချင်ရာကို ရေးချင်သလို ရေးပြီး တင်တဲ့ ဂီ...
ရေးချင်ရာကို ရေးချင်သလို ရေးပြီး တင်တဲ့ ဂီ…
နှစ်သစ်မှာ ဂီဂီ ရဲ့ ပထမဆုံးပို့စ်ကို ပထမဆုံးဖတ်ပြီး
ပထမဆုံးကွန်းမန့်ကို ဖတ်ချင်တဲ့ အပိုင်းလေးရွေးဖတ်ပြီး
တစ်နှစ် ကြီးသွားလို့ ဘဘ မှာ ကြီး ထည့်လိုက်တာပါ။
အားပေးတာ ကျေးကျေးပါ ဘဘ ဘလက်ရေ….
သည်နှစ်သစ်အတွက် စာဆက်ရေးဖို့ အားဖြစ်စေလို့ပါ
ဂီဂီ့လိုပဲ ဘော်ပင်မကိုင်ပဲ စာရေးတာ တော်တော်ကြာပြီ …
ကြာတော့ ကွန်ပျူတာထဲကစာလုံးတွေကို ကိုယ့်လက်ရေးလို့ထင်လာတဲ့အထိပဲ …
ကိုယ့်လက်ရေးကိုယ် ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာတောင် မေ့တေ့တေ့ဖြစ်နေပြီ …
နှစ်သစ်မှာ တီလုပ်မလေးဒွေ နှိပ်စက်နေတယ် အန်တီဝေရေ့ ….
“ကျနော့်ကို စာရေးဆရာ ဟု သတ်မှတ်ပါက …
ကျနော့်ကို ဒါ့ပုံဆြာ ဟုခေါ်ဆိုပါက ..ကျနော်သည် …ဖလင် မကိုင်ဘူး ..မဆေးဖူးသော
ဒါ့ပုံဆြာ ပါပေ။ ကျနော် သည် အခြေခံ တန်ဖိုးများမပြည့်ဝသည့် လူ့ပေါက်ပန်းမျှသာဖြစ်၏”
အဲ့ဒီအတွေးက လှလိုက်တာ ဟုတ်တာပေါ့ ဖလင်မကိုင်ဘူး မဆေးဖူးသော ဓာတ်ပုံဆရာတဲ့ တခါမှတောင် မတွေးမိဘူး .. ဟုတ်တယ် သူများတကယ့်ဓာတ်ပုံဆရာများဆို ကိုယ်တိုင်ဆေးတယ် ပြောကြတယ်……
ဘောပင်စာရွက်မကိုင်သော typing သမားဆိုတာလေးတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး
ဘာတွေကိုပဲ စာစီစာစီ ရင်တွင်းဖြစ်ကိုရေးတာမျိုးဆိုရင်တော့ typing ရိုက်တာထက်တော့ ပိုပါတယ်…
အခြေခံတန်ဖိုး မပြည့်ဝတဲ့ လူ့ပေါက်ပန်းဆိုရင်တော့ ငြင်းချင်တယ် လူ့ပေါက်ပန်းက MLM ကစလို့ laptop , camera ဘယ်လို ၀ယ်သင့်တယ် ၊ ဈေးကွက်မှာ ပုံရိပ်ကောင်းကို ဘယ်လိုထူထောင်ရတယ်ဆိုတဲ့ စတဲ့စတဲ့ စာမျိုးတွေ ရေးနိုင်တဲ့ အသိဘယ်ရှိမှာလဲ…..
” ကျနော် ကတော့ ယခင်လို ခဲတံ ဘောပင် ကိုင်၍ စာမရေးတော့….။
နေသော လူတန်းစားမျှသာဖြစ်၏ ။ ”
ဒီစကားလုံးတွေကို ကြိုက်တယ်ဗျာ …
အစအဆုံး အကုန်လုံး လန်းတယ် …
ကျနော့် စာ တွေ စာမူ အနေနဲ့ ထုတ်မယ်ဆို …
ထုတ်ဝေသူ Very good /Very bad ဖြစ်မှာ မြင်ယောင်တယ်ဗျို့….
စာတွေက ကွန်ပြူတာနဲ့ စာပြန်စီ စရာမလိုလို့ ဗဲရီးဂွတ်…
စာလုံးပေါင်းမှား လွန်းလို့ ..ဗဲရီးဘတ်….
ကိုယ်ရေးတဲ့စာတောင် ကိုယ့်ဖာသာ မနည်းဖတ်ရတယ်။
လက်ရေးလှတာ မလှတာဆိုတာကို မစဉ်းစားတာ ကြာပေ့ါ။
(လက်ရေးမှ ပြောသော လူ့စရိုက်အကြောင်း…
အန်တီရေ တချို့ လက်ရေးတွေက ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရှင်းနေတယ် လှတာ မလှတာ မဆိုင်ဘူးပေါ့.. နောက်တချို့ လက်ရေးတွေက ရှုပ်နေတယ် လှတာ မလှတာ နဲ့ မဆိုင်ဘူးပေါ့..
ဆူး လက်ရေးကတော့ တော်တော် ရှုပ်တယ် လှလည်း မလှဘူး။ ၀ိုင်းအောင် ရေးလည်း ရှုပ်နေတာပဲ.. တခု နဲ့ တခု ဆက်နေလို့နဲ့ တူပါရဲ့။
ဂတ်တူဆို ဂျီး ..ဘယ်နည်းနဲ့မှ
လက်ရေး မလှနိုင်ဝူးရယ် ဆိုတာ …
လက်ရေးကပြောတဲ့ လူ့ စရိုက်အကြောင်းတော့ ဂီ တကယ် ..မသိပါခင်ဗျား
လက်သီးပုန်းအနီတွေ များနေတယ် နော်။
နှစ်သစ်မှာ လူချစ်လူခင်များအောင် ကိုရင့်ဆီက ယတြာမေးပြီး ချေပေတော့။
(ကွန်မကောင်းရတဲ့ကြားထဲ လက်သီးပုန်း အနီတွေကို လိုက်စိမ်းပေးနေရတာနဲ့ အချိန်တွေပဲ့ပါသွားပြီ။ နှမျောလိုက်တာ။)
ဟဲဟဲ …အတည် အကောင်းလေးတွေများရေးရင် ..
အနီကဒ် ချီးမြင့်ခံရမယ်ဆိုတာ တိပီး မျှော်လင့်ပီးတားဘာ….
ဆဲစာလေးများ ရေးမယ် ပေါက်ပန်း၄၀လေးများ ရေးမယ်ဆိုရင်ဒေါ့ …
စိမ်းသောသစ်ရိပ်အောက်တွင် …စိမ်းသော မြမြက်ခင်းပေါ်…ပေါ့ …..ခိခိ….
ရင်ထဲ သိပ်မထားလော့ဘာဘူးဂျာ ……
မခံဇားနိုင်ရင် မရေးလော့ဘူး ဖြစ်တွားမှာပေါ့နော….
ူဆူးလည်း အရင်က သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ လက်ရေးကို တုပြီးရေးဖူးတယ်။
ဆူးရဲ့ စာအုပ်တွေကို သူကို ရေးခိုင်းဖူးတယ်။
အဲဒီသူငယ်ချင်း လက်ရေးလှလှလေးတွေ စီနေတာကို သဘောကျလို့ ငါ့ကို ကူးပေးပါဆိုပြီး ညာညာပြီး ရေးခိုင်းတယ်။
ကျောင်းပြီးသွားတော့ သူရေးပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို အမှတ်တရ ထုတ်ကြည့်ဖူးတယ်။
သူရဲ့ လက်ရေး အသတ်အကျ တွေက အစ ထပ်တူ ဖြစ်အောင် လိုက်ရေးပေမဲ့ သူ့လောက်တော့ မလှဘူး။
သူနဲ့ မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူး သိမ်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း ပိုးတက် ချတက် ဖြစ်ကုန်ပြီ..
နောက်ထပ် ၁၀နှစ်လောက် ကြာတဲ့ အချိန် ယခု အချိန်မှာ ပြန်တွေ့တဲ့ အခါ လက် ၁၀ချောင်း နဲ့ ကွန်ပြူတာကို မြန်မြန်တော့ ရိုက်တတ်နေပေမဲ့ ဘောပင် ကိုင်စာရေးတဲ့ အလုပ်လည်း မလုပ်ဖြစ်တာ အတော်ကြာခဲ့ပြီ ဆိုတာ သတိထားမိခဲ့တယ်။
အတုခိုးတဲ့ အထဲမှာ ခဲပန်းချီလှလှလေးတွေ ဓါတ်ပုံကို ကူးဆွဲနိုင်တဲ့ပညာလည်း ပါတယ်။
တော်တော် ဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်။ မျက်နှာ အသွင်အပြင် အနီးစပ်ဆုံး တူအောင် ဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်။
အခုပြန်တွေ့တဲ့အခါ နင့် ငါ့ကို တာဝန်တခု မကျေဘူး ငါ့ကို အခုထိ ပုံတူ မဆွဲပေးသေးဘူးလို့ ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူ ပြန်မေးတဲ့ နင်ကော တော်တော် တိုးတက်ပြီလား ဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ ဆူး စွန့်အ သွားခဲ့တယ်။
၁၀ နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန် ယန္တရားကြီးက လူတွေကို ဘ၀ ပုံစံတခုစီ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာ မလွဲမသွေပါပဲ။
လက်ရေးလှ အောင်ရေးတာ ကျင့်ယူလို့ရပါတယ် ။
ဝ လုံး ၊ စတုရန်း နှင့် တြိဂံ တွေကို စိတ်စိတ် ညီညီလေး
ဗလာစာအုပ် ၂ အုပ်လောက် အပြည့်ရေးလိုက်ပါ ။
ပြီးရင် ဖတ်စာအုပ်ထဲက စာလုံးတွေအတိုင်း
၂ အုပ်စာလောက် ကူးချလိုက်ရင် ရပါတယ် ။
အဘ ငယ်ငယ်က ဒီလိုပဲကျင့်ယူလာတာပဲ ။
ဆူး က စိတ်လည်း မြန်သလို စိတ်လည်း မရှည်တတ်ဘူး ဘာလုပ်လုပ် အစကောင်းသလောက် အဖျားရှူး အဆုံးသတ်ညံ့တတ်တယ်။ ဆူး ရဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်က ဆူး ကို ဝေဖန်တယ် နင်က စာရေးလိုက်ရင် အစက ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ အဆုံးပိုင်း ဆွဲစိလိုက်တာ ဇတ်လမ်းက ဆတ်တငံ့ငံ့နဲ့တဲ့.. စိတ်မရှည်မှန်း သိပ်သိသာတာပဲတဲ့…
ဆူးလည်း ကိုယ့်ဟာကို သိပါတယ် ပြင်ရကောင်းမှန်း သိပေမဲ့ ပြင်ဖို့ စိတ်မရှည် ဖြစ်နေတာ။
လက်ရေးကတော့ အရင်ကထက်ကို ပိုပြီး ညံ့သွားတာ အမှန်ပဲ.. ကွန်ပြူတာပဲ နိပ်နေလို့လား မသိဘူး။
ကွန်ပျူတာစသုံးထဲက လက်ရေးဆိုလဲချာတူးလန်(ရွာသားချာတူးလန်မဟုတ်ပါ) ၊ သင်္ချာဆိုလဲ ၁+၁ ကအစ ကတ်ကူလေတာမရှိ ကွန်ပျူတာမရှိရင် မတွက်တတ်တော့ဘူး…
ဒါကြောင့်စာရေးဆြာတစ်ယောက် သရော်စာတစ်ခုမှာရေးဘူးတယ်…. “လူတိုင်းလုံးမှာ သက္ကရာဇ် ၃၀၀၀ မှာ” တဲ့. အဲဒီအချိန်မှာ Science ကအရမ်း တိုးတက်လာတော့ လူတွေက အိမ်ထဲမှာနေလဲ အပင်ပန်းခံပြီး လမ်းမလျှောက်တော့ပဲ အော်တိုချဲ ပေါ်မှာပဲ ရီမုတွေနဲ့သွားချင်တဲ့နေရာသွား၊ စားစရာဆိုလဲ အပင်ပန်းခံပြီး ချက်နေ၊၀ါးစားနေစရာမလိုတော့ လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တွေကို ပဲ အရည်သို့အခဲ အဖြစ်နဲ့မျိုချ၊ ကွန်ပျူတာတွေဆိုလဲ တပ်ခ်ျစကင်ထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ Mind Screen ရေးချင်သမျှ တွေးလိုက်ရုံနဲ့ အလိုလိုပေါ်လာ၊ ကီးဘုတ်ရိုက်စရာ လက်မလိုတော့၊ Evolution Theory အရ အသုံးမပြုတဲ့ပစ္စည်းက အလိုလိုပျောက်ကွယ်လာမယ် ဆိုတော့….
လျှောက်စရာမလိုတော့တဲ့ ခြေထောက်တွေတဖြည်းဖြည်း တိုဝင်လာ၊ ရီမုနှိပ်ရုံကလွဲပြီး အသုံးသိပ်မ၀င်တော့ တဲ့ လက်တွေလဲ တိုဝင်လာ၊ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေပဲ စားတော့ ဒိုင်ဂျက်စတစ် စစ်စတန်လဲမလိုတော့ အညစ်အကျေးစွန့်အင်္ဂါတွေလဲမလိုတော့၊ ခေါင်းကိုပဲ အသုံးပြုရတဲ့အတွက် ခေါင်း ကပဲ မတန်တဆကြီးလာမယ်၊ လက်တို၊ ခြေတို၊ ခေါင်းကြီးသာကျန်ပြီး လူတိုင်းလုံးမှာ သက္ကရာဇ် ၃၀၀၀ မှာတဲ့….
မမှီလည်း လက်ရေးအလွန်လှကြောင်း ၀င်ကြွားလိုက်ဦးမယ်။ အမေတို့ဆီ စာရေးရင် အမေက အမြဲပြောတယ် ညည်းလက်ရေးက အစပဲ ကောင်းကောင်းဖတ်ရတာပါကွယ်။ စာနောက်ပိုင်းရောက်လေ ပဲပင်ပေါက်တွေ တင်ထားသလား အောင့်မေ့ရအောင် ဖတ်ကို မ၇တော့ဘူးတဲ့ အဲ့လို လက်ရေးလှတာ။ စာရေးရင်းကနေ စိတ်ကမရှည်တော့ ပြီးစလွယ် စာဖြစ်ပြီးရော ရေးတာ။ လက်ရေးလှတဲ့သူဆို သိပ်သဘောကျတာ ကိုယ်တိုင် အဖြစ်မရှိလို့။
သူမ သည် ဘာမှ မလှပါ
သို့ သော် ကျွန်တော့် စိတ်ထဲတွင် လွန်စွာ အူယား၏
ထို့ ကြောင့် သူမ အချစ် ကို ရအောင် ကြိုးစားခဲ့သည် ။
ထိုအတွက် ကျွန်တော် အရမ်းပျော်ရပါသည် ။
ပျက်ပါဘီ ..နာ့ပိုစ့်လေး ပျက်ပါဘီ..
အဲ့တုန်းက ကုလားဘုရားပွဲ လှည့်ခဲ့ဖူးတာပါ…
ခုတော့ ..မောင်ရင်လောင်း ပွဲ လှည့်သွားဖူးတဲ့ သဲလမ်းမကြီးလို
ထို.ကြောင်. ဂီဂီ အသဲကွဲနေပါသည်
ရေးချင်တာကို ရေးပြီး တင်တယ် ဆိုပေမယ့် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အစ အဆုံး ဖတမိအောင် ရေးနိုင်လို့အားကျ အတုယူလိုက်ရပါတယ် ။
ရသ စာပေကောင်းတွေ ဖန်တီးနိုင်မယ့် လက်..လို့မြင်မိပါတယ်ဗျာ။
အစ်ကို တို့ အားပေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် …
ညီ ကြိုးစားနေဦးမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း….
ကြောင်တောင်တောင်လုပ်လျင် လက်ဝါးပြင်းကြီးနဲ့ ဗျန်းခနဲ ရိုက်တတ်၏
သူမသည် ညာသန်ဖြစ်၏ …
ထို့ကြောင့် ကျနော့် ဘယ်ဖက်ပါး မကြာခန နာကျင်စပ်ဖျဉ်းရ၏
ကွန်ပြူတာတွေဘယ်လိုပဲပေါပေါ အခုအချိန်အထိ စာမေးပွဲတွေနဲ့နပန်းလုံးနေရဆဲမို့
မိုးစက်ကတော့ ball pen ကိုင်နေရတုန်းပဲ ကြုံတုန်းကြွားရရင် မိုးစက်လည်းလက်ရေးအရမ်းလှတယ်
လက်ရေးလေးက လှလိုက်တာ ၀ိုင်းချွန်ကောက်ကွေးနေတာပဲ
ညီမလေး လက်ရေးလှတယ်ဆိုတာ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ…
ဂီဂီ အဲဒီလက်ရေးလှလှ ကောင်မလေးအကြောင်း နောက်ပို့စ် တွေ ထပ်တင်နော်
ကြိုးစားပါဦးမယ် …ဦးနိုရေ ….
ဂီသည် ထိုလက်ရေးများကို စွဲလန်းမိသွားကာ
ထိုအခါ ထိုကောင်မလေးသည် အသားမဲမဲ နဲ့ ကုလားမလေးဖြစ်နေသည် …တိန်
စာအရေးအသားကောင်းပါတယ် ဂီ…တို့အားပေးမယ်နော် …. အချိန်တွေလွန်လို့ အသက်တွေကြီးလာရင် …စာရေးစရာလုပ်မယ့်ဂီစာအုပ်တွေကို လိုက်ဝယ်ပြီး ကုလားမလေးလုပ်မယ့်